window password virus : ကူညီပါဦး — MYSTERY ZILLION
window password virus : ကူညီပါဦး
သူငယ်ချင်း တယောက်က ကျွန်တော်စက်တလုံး Windows xp ပြန်တင်မရလို့လာပေးပါတယ် ကျနော်လည်း ပင်ပင်ပန်းပန်းတင်လိုက်ပီ(format2time, repair 1 ) မှရပါတယ် window လည်းတက်ရော admin ကော guest ကအစ password တောင်းပါတယ် .. ကျနော်မှာရှိတဲ့ window password delete လုပ်တဲ့ cd လေးနဲ့ လုပ်တော့လည်း မရဘူး .. အဲဒီcd ရိုးရိုးအတိုင်း လုပ်ထားတဲ့ pw ဆိုရပါတယ် .. :2: ကျနော် အထင်နော် virus လို့ထင်ပါတယ် ..
အော် မေ့တော့မလို့ ... d: က data တွေရှိတယ်ဆိုလို့ လုံး၀ format ရိုက်လို့မရဘူးခင်ဗျ ..
တခြားစက်မှာ secondary နဲ့တက်ရင်လည်း တခါတမျိုးမရိုးအောင် ပြနေလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကူပါဦးနော် ... (:((:((
safemode မှာလည်းမရပါဘူး pw တောင်းတာပါဘဲခင်ဗျာ ...
Virus မဖြစ်နိုင်လောက်ဖူးထင်တယ်နော်............ တခြားတော့ မကြုံဖူးလို့ မပြောတတ်ဘူးဗျာ... အထင်လေး ၀င်ပြောကြည့်တာပါ..........
ဒါလေး ဆိုရင်ရောဗျာ...... Live Cd နဲ့တက်ပြီး Crack ပြန်လုပ်ကြည့်ရင် အဆင်ပြေမလားမသိ.............
1. Windows Xp CD နှင့် Boot နှင့်တက်ပါ
2. တက်လာပါက ဒုတိယအဆင့် Repair ကိုနှိပ်ပါ.
3. file အချို့ကို copy ကူးပြီး restart ကျသွားလိမ့်မယ်.
4. နောက်တက်လာတဲ့အခါ ဘာမှမနှိပ်ပါနဲ့
5. အဲဒီမှာ 39 minutes ဆိုပြီး Installing Devices Progress bar အတန်းလေး တဖြည်းဖြည်းတက်လာပါလိမ့်မယ်.
6. အဲဒီ့မှာ Shift + F10 ကိုနှိပ်တဲ့အခါ Command Console တက်လာပါမယ်.
7. ဒီမှာ NUSRMGR.CPL ကိုရိုက်ပြီး enter နှိပ်ပါ.
8. ကဲအခုဆို Control Panel ထဲက User Account ထဲကိုရောက်သွားပါမယ်.
9. ဒီအဆင့်မှာပဲ သင်မလိုချင်တဲ့ အကောင့်ရဲ့ပတ်စ်၀က်ကို Remove လုပ်ရင်လုပ်.
new password ထည့်ရင်ထည့်ရပါပြီ.(command promt ထဲမှာ userpasswords2 ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ရင်လည်း user account ပေါ်လာမှာပါ.)
10. နောက် windows repair ပြီးတဲ့အထိစောင့်ပါ..ပြီးသွားပါက windows ပတ်၀က်က သင်လုပ်ထားတဲ့ settings အတိုင်းရှိမှာပါ.
Virus မဖြစ်နိုင်ဘူး Bro.
ကျနော် အကြံပေးချင်တာက ...
Windows CD ပြောင်းပြီး တင်ကြည့်ပါဦးလား။ အဲဒီ တစ်ခုက မကောင်းပဲဖြစ်နေလို့များလားလို့။
ရသွားပီခင်ဗျာ .. ရသွားပါပီ ... ERD နဲ့ run ကြည့်လိုက်တော့ D ထဲမှာလည်း window အဟောင်းတစ်ခု ရှိတယ်ခင်ဗျ .. နောက် "ဥမ္မာစိုး" ခင်ဗျာ သူပဲ D တစ်ခုလုံးနေရာယူထားတာ .. အားလုံးကို လိုက် del လုပ်ပီး Window repair လုပ်တယ် .. မရလို့ C ကို format ချပီး ပြန်တင်တယ် ..
ဘယ်ဟာကဘယ်လိုအဆင်ပြေသွားသလဲဆို တာ တော့မသိဘူး password လဲမတောင်းတော့ဘူး အားလုံးလဲ အိုကေသွားပါပီခင်ဗျာ ..
ERD နဲ့ run , D ထဲ က funny (ဥမ္မာစိုး) နဲ့ပတ်သတ်တာတွေကို ရှင်း ၊ D ထဲက window တစ်ခုရှိနေတာကို del လုပ် ... နောက် C ထဲက password တောင်းနေတဲ့ window ကို format လုပ်ပီး အစအဆုံးပြန်တင် .. အဲလိုလုပ်ပီး အဆင်ပြေပါတယ် ..
:D:D:D:D ရမ်းကု မက်သက် ပါခင်ဗျာ .. :D:D:D
အော် ကျနော်ကောင်းနေတဲ့စက်လေးနဲ့ သူ HD ကိုချိတ်ပီး လုပ်လိုက်လို့ ကျနော် HD ကိုပါ funny ကူးသွားပါတယ်ခင်ဗျာ .. ညမီးအိမ် ၊ exitplus တို့ ပေးတာတွေနဲ့ တော်တော်သတ်လိုက်ရတယ် .. ကျေးဇူးပဲနော် ...
ခေါင်း၀ိုင်းစားပေးတဲ့ MZ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ...